ဟိုတယ်တည်ဆောက်ခွင့်(၂)ခုနှင့်တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း လိုင်စင် (၃) ခု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွား ကော်မတီခွင့်ပြု...
ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေ သတင်း | Posted By နှင်းအိခင်
[Unicode] ဟိုတယ်တည်ဆောက်ခွင့်(၂)ခုနှင့်တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း လိုင်စင် (၃) ခု၊ စုစုပေါင်း အခန်း (၁၀၂) ခန်း၊ ကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွား ကော်မတီကခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်ကပြုလုပ်သော အဆိုပါ ကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၁) အစည်းအဝေးအရ...
အစ္စရေးတွင် Pfizer ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူပေါင်း ၁၂,၀၀၀ ကျော် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ
ပြည်ပ အိမ်ခြံမြေ သတင်း | Posted By ရွှေစင်ဝင်း
[Unicode] အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် Pfizer/BioNtech ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူပေါင်း ၁၂,၄၀၀ ကျော်၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပေါ့စတစ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် ဒုတိယမြောက်ဆေးအလုံး ထိုးနှံခဲ့သူ ၆၉ ဦးလည်း ပါဝင်သည်။ အစ္စရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လူပေါင်း ၁၈၉,၀၀၀ ဦးကို Pfizer ၏...
ပန်းခြံနှင့် အားကစားကွင်းများ အချိန်ပိုင်းပြန်ဖွင့်ပေးမည်
[Unicode] ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပန်းခြံနှင့် အားကစားကွင်းများအား ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်မှစ၍ အချိန်ပိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကို တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်...
အိန္ဒိယမှ ဝယ်ယူထားသည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့်ဓာတ်မတည့်သူများ ၎င်းဆေးမထိုးရန် အကြံပြုခံရ...
[Unicode] COVID-19 ကာကွယ်ဆေး Covidshield တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဓာတ်မတည့်သူများအနေဖြင့် ၎င်းကာကွယ်ဆေးအား မထိုးကြရန် ၎င်းကာကွယ်‌ဆေးကို ထုတ်လုပ်သော အိန္ဒိယ‌ကုမ္ပဏီ Serum Institute of India က အကြံပြုလိုက်သည်။ ထို့အပြင် ပထမတစ်လုံးထိုးပြီးနောက်...
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် ကာကွယ်ဆေးဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့် Moderna ၏ ကာကွယ်ဆေးလုံးရေ ၃၃၀,၀၀၀ ကျော်ကို မထိုးနှံရန် သတိပေး...
ပြည်ပ အိမ်ခြံမြေ သတင်း | Posted By ဇာနည်ကျော်
[Unicode] အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခံခဲ့သူ ၆ ဦး၌ ကာကွယ်ဆေး ဓာတ်မတည့်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် Moderna ၏ ကာကွယ်ဆေးလုံးရေ ၃၃၀,၀၀၀ အသုတ်ကို ထိုးနှံမှုများ ရပ်ဆိုင်းရန် ကယ်လီဖိုးနီးယား ကျန်းမာရေးအကြီးအကဲတစ်ဦးက...
Covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသော်လည်း ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရနိုင်ကြောင်း လေ့လာချက်သစ်တစ်ရပ်တွင် တွေ့ရှိ...
ပြည်ပ အိမ်ခြံမြေ သတင်း | Posted By အေးမြတ်သူ
[Unicode] Covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသူဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) ယခင်က ရောဂါကူးစက်ခံရဖူးသူဖြစ်စေ ယနေ့ပေါ်ထွက်နေသော ဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးသစ်များအနက် တစ်ခု၏ ကူးစက်ခြင်းခံရနိုင်ကြောင်း လေ့လာချက်သစ်တစ်ရပ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ...
သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိ ယာမြေများကို တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဆောက်ရန်လှူဒါန်း
ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေ သတင်း | Posted By ရွှေစင်ဝင်း
[Unicode] ရှမ်းပြည်နယ် ရပ်စောက်မြို့နယ် ကောင်းဘို့ကျေးရွာတွင် ဒေသခံတစ်ဦးက သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိ သူ၏ ယာမြေများကို တိုက်နယ်ဆေးရုံဆောက်ရန်လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း MyanmarHarpMedia မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က သိရသည်။ ယာမြေအလှူရှင်မှာ ဦးအောင်စိုးဆိုသူ ဖြစ်ကြောင်း၊...
စက်မှုကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၃)ခုနှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှု (၁)ခု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှုကော်မတီ အတည်ပြု...
ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေ သတင်း | Posted By စည်သူအောင်
[Unicode] စက်မှုကဏ္ဍတွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း(၃)ခုနှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှု (၁)ခုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှုကော်မတီအတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်က ပြုလုပ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး...
မြန်မာအပါအဝင် ၆ နိုင်ငံသို့ ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ စတင်ပြီး အိန္ဒိယက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးများ လက်ဆောင်အဖြစ် ပို့ပေးတော့မည်...
[Unicode] အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်း ၆ နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ်ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင် စတင်ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ကာကွယ်ဆေး တင်ပို့ပေးမည့်နိုင်ငံများမှာ မြန်မာ၊ ဘူတန်၊ မော်လ်ဒိုက်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊...
မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍပြန်လည်ထူထောင်ရေး မဟာဗျူဟာလမ်းပြမြေပုံထုတ်ပြန်
[Unicode] မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍပြန်လည်ထူထောင်ရေး မဟာဗျူဟာလမ်းပြမြေပုံကို Download ရယူနိုင်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်က ထုတ်ပြန်အသိပေးထားသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်...
Copyright © 2021 Royal Tun Thitsar Co., Ltd. - Just another WordPress site
Copyright © Royal Tun Thit Sar. | Featured Agency of iMyanmar